Twin Spin Deluxe ™ by NetEnt ingenye Kuhle Slots Ibhonasi Umdlalo etholakalayo abagembuli inthanethi. Senziwa an amazing Twin Reels nesici Cluster Pays uhlelo ukuthi ungathola abadlali abahola Okuphindaphinda ka kakhulu ngendlela 1,000x sum yabo elibekwe. Funda okwengeziwe ngale slot ezithakazelisayo inthanethi ngokufunda Ukubuyekeza ngezansi.
Qala Playing The Best Slots Ibhonasi Game With Inani Token
Thola inthanethi namuhla futhi urejiste eqashelwayo amageyimu indawo ukuvula i-akhawunti ukudlala futhi wenze ukubheja ezifakwa yakho. Twin Spin Deluxe ™ izishaya isifuba njengoba omunye Kuhle Slots Ibhonasi imidlalo akutholakali ngenxa ivumelana nezimo. ezigxotsheni okuphansi inthanethi yekhasino abagembuli ingakwazi ukusebenza uma ongaphakeme ukubheja isamba.
Nge nje 10p ungaqala ukudlala le 6 esondweni umdlalo. Ngokolunye uhlangothi, abadlali abakwazi ukubeka kubhejwa njengoba eliphezulu £ 100 uma uthanda. Azikho paylines kule slot, ke uncika Cluster Pays uhlelo esikhundleni. Une ukwakha amaqoqo kwemifanekiso ezifanayo futhi itolitji ezakhelene babe sebakwati win cluster. Amatshwayo ku show zihlanganisa A, J, K no Q kanye 7s obomvu, Amabha, izinsimbi, cherry kanye diamonds okwesibhakabhaka.
Ukuzuza Greater Uwine Nge iWele Reels Izici
Omunye izici Kuhle Slots Ibhonasi umdlalo emhlabeni yinkulumo Twin Reels. Lapha omunye esondweni isethi sizonwebisa ukuze uhlangane nomunye isethi esondweni. Linanincane itolitji ezintathu kuya kwayi itolitji eziyisithupha kungenziwa ahlanganisiwe.
Amatshwayo phezu ekwandiseni esondweni isethi ngeke kabili uqobo phezu izikhundla abafanele ngakolunye esondweni isethi. Lokhu kuzosiza abadlali ukuba babe ngaphezulu cluster onqobayo, uwine multipliers futhi kuthuthukise izinkokhelo zabo jikelele olulindelekile.
I multipliers in The Best Slots Ibhonasi Game Iyatholakala
Uma ukuze uthole win cluster ku Kuhle Slots Ibhonasi umdlalo kuyatholakala, kufanele ube yinhlanganisela ofanayo izimpawu ayisishiyagalolunye. Ngokuba ukudlala izimpawu ikhadi, uma une yinhlanganisela amathathu yalesi izimpawu, uzothola Okuphindaphinda 100x esigxotsheni.
Ukuze uthole i-cluster ehlanganisa cherry amathathu noma izinsimbi, uzothola Okuphindaphinda 250x esigxotsheni. Inkantini futhi 7s obomvu kuyokwenza bakuthande a Okuphindaphinda 500x esigxotsheni (i.e. amahlukuzo 30 ngoba noma). The esiphezulu esigxotsheni Okuphindaphinda ukuba wathola kule slot 1,000x. Lokhu ibangelwa kokufika yinhlanganisela amadayimane amathathu okwesibhakabhaka.
Kukhona okuhle eziningi kusukela kule slot online. I ihluzo zenziwa ngendlela Futuristic kanye soundtrack unika umdlalo amandla amaningi. IWele Reels sici esisodwa eyokusiza umhlaba amaqoqo kwezimpawu afanayo kaningi ngenkathi amahlukuzo amadayimane amathathu blue kuyokwenza bakuthande i 1,000x emangalisayo esigxotsheni Okuphindaphinda.